English / .Shona
English / Shona
Kana tichitevera Biology, "munhu anotanga kusikwa panosangana murume nemukadzi" kana murume nemukadzi vasanganisa nhengo dzavo, uyu makumi maviri ane nhatu dzinonzi ma chromosomes pavanosangana zvinoita kuti vatange kusika mumhu.
Kumadzimai izvi zvinozikanwa "sezai" ramai asi zita racho chairo rinonzi "oocyte".
kune vanhurumewo zvinozivikanwa sehuronyo. zvinozivikanwa sehurume kana kuti "sperm" muchirungu asi zita racho chairo rinonzi "spermatozoon".
Kana nyoka yemunhukadzi yaburitsa zai kana"oocyte" zvinodaidzwa kuti ovulation, zai kana "oocyte" ne "spermatozoon" zvobatana mune tumatambo twakabata chibereko, twunozivakanwa nezita rekuti "Fallopian tubes".
Twutambo utwu Twunobatanidza ma"ovaries" nechibereko.
Chinobuda ipapo chimubatanidzwa Che embryo chinonzi "zygote", izvi zvinoreva kupinda pajoke rimwe kana kubatanidzwa.
Zygote rine makumi mana nematanhatu enhengo nhengo idzi ndidzo dzinovamba upenyu hwemunhu ega-ega uyendiyo inonzi "genetic blueprint" yakakwana. Masikirwo emunhu anogara mukati mehata yakamonwa ye ma"molecules" anonzi "DNA". Anochengetedza makuriro Anoita munhu kubva pakuberekwa kusvika muviri wese wakwana.
Ma "DNA molecules" akafanana nemanera akamonerera anodaidzwa kuti "double helix". Manera aya anenge aine Ma"molecules" maviri-maviri, kanakuti mabesi anonzi "guanine", "cytosine", "adenine", ne "thymine".
Ma"Guanine" anosangana chete ne "cytosine", ne "adenine" ine "thymine". Mukati memunhu ega-ega mune Ma"cells" anopfuura zviuru zvezviuru zvitatu zvakasungwa pauviri-viri.
Saka "DNA" ye "cell" rimwechete Inochengeta ruzivo rwekutoti dai painyorwa nemazwi, zvaireve kuti vara rekutanga pabesi rega-rega rinotoda mavara akapfuura miriyoni nechidimbu zvemapepa akanyorwa!
Kuzoti zvikaitwa mudungwe, inokwana mutsetse wakareba mafiti matatu nechidimbu kana kuti mita imwechete.
Tikamonorora Yese zvayo "DNA" inowanikwa mumunhu mukuru tinowana zana rezviuru zvema'cells' kana kuti rwendo rwunopfuura mamayera makumi matanhatu ane nhatu ezviuru. Pano tingati zvakaenzana nekubva pasi pano kuenda kuzuva nekudzoka Kunokwana mazana matatu ane mana.
Kana pachangopera zuva rimwechete muchangosana, zai kana "zygote" rinenge rapinduka kuita maviri, nenzira inodaidzirwa kuti 'mitosis' zai rimwe rinotsemuka kuita maviri ayo anoita mana zvichingoenda zvakadaro.
Mumashure mezuva rimwechete kana kuti maviri muchangopedza kusangana, nhumbu inenge yatobata uye inoongororwa ne "hormone" rinonzi "early pregnancy factor" rinowanikwa muropa ramai.
Mumashure memazuva Matatu kana mana mabvakusangana, kumeduka-meduka kwema'cells' emu'embryo' kunoshanduka kuita sedenderedzwa uye "embryo" inopiwa zita rekuti "morula".
Mumashure memazuva mana kana mashanu Muchidenderedzwa munoita buri kana zvadayi "embryo" inopiwa zita rekuti"blastocyst".
Zvino ma"cell" arimukati me "blastocyst" anopiwa zita rekuti "inner cell mass" uye ndiwo anokurisa musoro,muviri, nedzimwe nhengo dzemuviri dzinove ndidzo dzakakosha pamunhu.
Ma"cell" anowanikwa Mukati-kati me"cell mass" anopiwa zita rekuti"embryonic stem cells" nekuti anokwanisa kuvaka rimwe rema'cell" anopfuura zviuru zviviri anowanikwa mumuviri wemunhu.
Kana mukatevera Mukati mechibereko, ka "embryo" kekutanga kanozvidyara mukati memadziro echibereko. Izvi zvinodaidzwa kuti"implantation" inotanga pamazuva matanhatu, iyo inoguma mumashure memazuva gumi kana guminemaviri muchangosangana.
Ma"cell" anobva mu"embryo" anotangisa kuburitsa "hormone" rinonzi "human chorionic gonadotropin", kana "CG", zvinove ndizvo zvinowanikwa pakuongorora kubatwa kwenhumbu.
Iyi 'HCG' ndeyekugadzirira mai kuti vachirega kuenda kumwedzi senguva dzose kuitira kuti nhumbu ibate.
Zvinoitika kana ma"cells" arikunze kwe "blastocyst" anokonzera kukura kweruguvhute, urwu rwunoita basa rekudzivirira mwana nema"embryonic circulatory systems".
Ruguvhute rwunounza mweya we"oxygen", zvinokurisa, ma"hormones", nezvinorapa mwana achirimudumbu; kubvisa tsvina yese; nekudzivirira ropa ramai kuti risasangane nere "embryo" kana nere"fetus".
Ruguvhute zvakare ndirwo rwunogadzira ma"hormone" nekuchengetedza madziyiro ema"embryo" ne"fetus" kuti adziye kupfuura amai.
Ruguvhute ndirwo rwunofambisa zvese zvinodiwa pamhunu rwuchishandisa tsinga dzinowanikwa muguvhu.
Zvese zvinochengetedza upenyu zvinowanikwa muruguvhute zvinokunda zvinowanikwa nzvimbo dzekurapa muzvipatara zviripamusoro-soro.
Mukupera kwesvondo, ma"cell" emukati-kati me"cell mass" anoita zviviri zvakafukidza zvinonzi "hypoblast" ne " epiblast".
Iyi "hypoblast" inokonzera kukura kwechakavhara zai, chinova chinokonzera kufamba kwezvinokudza mwana paanenge achiri pazera re"embryo".
Ma "cell" anowanikwapa "epiblast" anoita mambure anonzi "amnion", anova ndiwo anochengeta 'embryo' ichapinduka kuita "fetus" kusvikira mwana aberekwa.
Pakupera kwemasvondo maviri anechidimbu, "epiblast" inenge yavepo uye ne ma"specialized tissues" matatu, kana kuti ma "germ layers", anonzi "ectoderm", "endoderm", ne" mesoderm".
"Ectoderm" inokonzera kukura kwenhengo dzemuviri dzinosanganisa uropi, musana, tsinga, ganda, nzara, nevhudzi.
"Endoderm" inogadzira mukati mehuro nezvekufema zvese uye nezvekumedza nekudya zvese, uye nekugadzira dzimwe nhengo dzese dzemuviri dzakaita sechitaka nerwatata.
"Mesoderm" inogadzira mwoyo, neitsvo, mapfupa, tsinga dzinobatanidza mapfupa, nyama yemuviri, tsinga dzeropa, nedzimwewo nhengo.
Mumasvondo matatu uropi hunoita nhengo nhatu dzakakosha dzinonzi "forebrain", "midbrain", ne "hindbrain".
Mukugadzirwa uku nhengo Dzekufema nedzekudyisa dzinenge dzichigadzirwawo.
Chekutanga nhengo dzeropa dzinotanga kuonekwa mukatimezai riye, tsinga dzeropawo dzinotanga mukati mese me "embryo", nekutanga kwenhengo dzemwoyo.
Pakare ipapo, mwoyo unotanga kukura wotanga kupetana uye nhengo dzemwoyo dzotanga kukura.
Mwoyo wototanga kurova masvondo matatu nezuvarimwechete muchangosangana.
Nhengo dzinofambisa ropa ndidzo dzinotanga kugadzirwa, pano tinoreva zvese zvekufambisa ropa, kuti muviri urarame.
Pakati pemasvondo matatu nemana, muviri wese unotanga kuwonekwa kuti uropi, musana, nemwoyo unenge urimu "embryo" zvinonyatsowonekwa zvakabatana neganda rezai.
Makurumidziro ekukura anoita kuti "embryo" ipetanepetane. Kupetana uku kunosanganisa ganda rakakomberedza zai neganda remukati menhengo dzekumedza kudya zvovaka chipfuva nenhengo dzemudumbu memwana achirimudumbu
Mumashure memasvondo mana mvura inonzi "amnion" inokomberedza "embryo" igozadza munogara zai. Iyi mvura haina hutachiona uye inonzi "amniotic fluid", uye ndiyo inodzivirira "embryo" kuti isakuvadzwe.
Mwoyo unorova zvinoverengeka Kuita zana nemakumi matatu piminiti rega.
Apa onaiwo Kuchinja ruvara kunoita mwoyo kana ropa richipinda nekubuda munhengo dzemwoyo paunorova.
Mwoyo unorova kanokwana makumi mashanu emamiriyoni mwana asati aberekwa uye zviuru zvitatu zvemamiriyoni Kana tichiyera upenyu hwemakore makumi masere
Makurumidziro ekukura kweuropi kunoonekwa nemapindukiro eruvara rwe "forebrain", "midbrain", ne "hindbrain".
Maoko nemakumbo anoonekwa kutanga kukura nekubuda kwezvinenge mazvimbiswa mumasvondo mana.
Apa ganda rinenge richinjenjemera nekuti rinenge rakakora se'cell' rimwechete.
Kana ganda richikora, kunjenjemera uku kunopera, zvinoreva kuti tinogona kuona nhengo dzemukati dzichikura kwemwedzi mumwechete unotevera.
Zera re"fetal period" rinoguma panoberekwa mwana.
Pamasvondo mapfumbamwe, kuyamwa chigunwe kunotanga, iyi ndiyo nguva mwana anenge avekumedza "amniotic fluid".
Pano "fetus" inenge yavekubata zvinhu, kufambisa musoro kuendesa kumberi nekumashure, kushama nekuvhara muromo, kufambisa rurimi, kufemereka nekuzvitatamura.
Tsinga dzekumeso, nedzemukati memaoko, nemukati metsoka dzinenge dzavekunzwa kubatwa.
"Kana ikabatwa zvinyoro-nyoro mukati metsoka," "fetus" inokotamisa magaro nemabvi kanakupeta zvigunwe.
Pano maziso anenge Akanyatsovharwa.
Muhuro munenge mavekuwonekwa, nhengo dzekubudisa izwi uye izvi zvinoreva kuti izwi ravekuzobuda.
Muvanasikana, chibereko chinenge chavekuonekwa uye zvese zvemumhukadzi zvinenge zvavepo, ma "cell" acho anonzi "oogonia", anenge achigadzirwa muma "ovary".
Zvinoratidza kuti munhuyiko zvoonekwawo kuvakomana kana vasikana.
Kukura kwakakurumidza pakati pemasvondo mapfumbamwe negumi kunowedzera huremo hwemiri zvakanyanya (75%).
Pamasvondo gumi, kubwaira kunenge kwatanga kunokonzera kuti ziso rigone kufamba richitarisa pasi.
"Fetus" inotanga kushama nekuvhara muromo.
"Fetus" zhinji dzinoyamwa chigunwe chekurudyi.
Divi rehura mudumbu hwakabatana neguvhu hwavakudzokera mukati medumbu.
Kusimba kwemapfupa kwavekuitika.
Nzara dzeminwe nezvigunwe dzinenge dzavekutanga kukura.
Minwe yakasiyana-siyana inotanga Kubuda pakupera kwemasvondo gumi. Izvi ndizvo zvinoshandiswa pakuzivisa munhu muhupenyu hwese.
Pamasvondo gumi nerimwechete mhuno nemuromo zvinenge zvanyatsobuda. Sezvinoita nhengo dzemuviri, zvinoshanduka nekukura uye nguva yega-yega inezvainoita pamakuriro emunhu.
Hura hunotanga kuchengeta zvekudya nemvura zvinenge zvamedzwa ne"fetus".
Kuti munhuyiko? zvinogadzirwa pakusangana, zvonoratidza kuti munhuyiko zvinotanga kuonekwa pamurume kana mukadzi.
Pakati pemasvondo gumi nerimwe negumi nemaviri huremo hwe:fetus" hunowanda zvakaita (60%).
Pamasvondo 12 ndipo Panopera chidimbu chechitatu chekutanga, kana kuti "trimester", yenhumbu.
Pano zvinopa kuraira zvinodyiwa zvavakuwanikwa mumukanwa. Panozvarwa mwana, zvekuraira Kudya zvinowanikwa parurimi chete nemukati nechepamusoro pemukanwa.
Pano tsvina inotanga kubuda pamasvondo guminemaviri zvigoramba zvakadaro kusvika masvondo matanhatu.
Tsvina iyi inobuda mu'fetus' nemuvana vacheche inonzi "meconium". Inosanganisa zvinonzi ma"enzyme" anobatsira kuzeya, ma'proteins',uye dzimwewo nhengo dzakafa dzinenge dzichibuda muhura.
Pamasvondo makumi maviri, kureba kwemaoko kunenge kwava kuzokwana kusvika pazera remunhu. Makumbo anotora nguva yakareba kusvika pazera rakakwanira munhu.
Kusara kwemusana nepanhova, muviri wese kana "fetus" yave kuvhunduka ikabatwa.
Zvinoita kutivarume nevakadzi vasiyane zvinotanga kuonekwa. "Fetus" yechikadzi inoratidza kufambisa muromo zvakanyanya kupfuura "fetus" yechirume.
Izvi zvakasiyana nekuvhunduka kunoitika pakutanga, iyi ndiyo nguva mwana anocheukira kuri kubva chekudya uye muromo uchivhurwa. Kucheuka uku kunonzi "rooting reflex" uye kunoramba kuriko mwana azvarwa, uye kunobatsira kuti mwana agone kuwana kunezamu ramai paanenge achiyamwa.
Kumeso kunoramba kuchikura apawo nyama inowanikwa matama otanga kukura mazino achitangawo kumera.
Pamasvondo gumi nemashanu, tsinga dzeropa dze"stem cells" dzinokura dzichiwanda mumwongo wemapfupa. Apa ndipo panogadzirwa ropa rakawanda.
Kufamba-famba kunotanga musvondo rechitanhatu re"embryo", mudzimai ane nhumbu anonzwa kufamba-famba pakati pemasvondo gumi nemana negumi nemasere Chiitiko ichi chinopiwa zita rekuti "quickening".
Pakupera kwemasvondo 10 ne6,matanho ekurapa anoshandisa zvinobaya zvinenge tsono kana zvimwe pedyo ne'fetus' zvinokanganisa ma "hormone" obva avhunduka achibva aburitsa "noradrenaline", kana "norepinephrine", yosangana neropa. Vana vacheche kana vanhu vakuru vanowanikwawo nezvakadai kana vavhundutswa nekubayiwa.
Munhengo dzekufemesa, mapapu nezvakadaro zvavakutokwana.
Panobuda zvimwe zvichena Zvinodzivirira zvinonzi "vernix caseosa", zvinofukidza 'fetus'yese. "Vernix " iyi inodzivirira ganda kuti risakuvadzwe kana kupiswa ne"amniotic fluid".
Mushure memasvondo 19 ekufamba kwe "fetus" kufema kunotanga, nekurova kwemwoyo kwotanga kutevera nzira yemazuva ese inonzi "circadian rhythms".
Pamakumi maviri emasvondo chekunzwa, chirimukati-kati menzeve, chinenge chatokwana kuenzana nechemunhu mukuru uye chiri mukatikati menzeve Kubva pano, "fetus" inotanga kuratidza kunzwa zvakawanda.
Bvudzi rinotanga kumera mumusoro.
Zvinodiwa paganda zvavapo zvese, kusanganisa tumvere nezviri pasi peganda.
Pamasvondo makumi maviri ane rimwe kana maviri muchangosangana, mapapu anenge avekukwanisa kufema mweya. Ichi chinhanho chakakosha pakurarama sekuti kurarama kwemwana abuda mudumbu kunokwanisika Pane mamwe ma'fetus' Pane nzira dzanozikanwa nenyanzvi dzanachiremba dzekuti mwana akwanise kurarama kana aberekwa nguva isati yakwana.
Pakupera kwesvondo makumi maviri anemana maziso anotanga kusvinura uye "fetus" inotanga kubwaira. Kutanga kunzwa, mheremhere kunonyanya kukurumidza kutanga pa "fetus" yechikadzi.
Vanamazvikokota vakawanda vanoti kunzwa mheremhere uku kunogona kukanganisa hutano hwe "fetus". Zvinowanzoitika apa kukanganisa marovero anota mwoyo, "fetus" ichikurumidza kumedza, nekukurumidza kushanduka magariro. Zvinogona kunganganisika zvachose zvinosanganisira kusanzwa zvachose.
Kana "fetus" ichikanganisika pakufema kana kuzarirwa zvakafanana nekufemera mukati nekunze kanokwanisa kuita ka44 paminiti yega
Pachidimbu chekupedzisira chemwedzi mitatu yenhumbu, uropi hunokurumidza kukura uye simba zhinji rinoshandiswa ne "fetus". Kurema kwehuropi kunowanda zvakapetwa kanokwanisa kuita kashanu
Pamasvondo 20 anematanhatu misodzi inotanga kubuda.
Maziso anotanga kunzwa kutosvorwa, pamasvondo makumi maviri nemanomwe Kutosvorwa uku kunoita kuti kupenya kusasvike mukati meziso muhupenyu hwemwana hwese.
Zvese zvinodiwa pakushandisa nhengo dzinonhuhwidza zvinenge zvavakushanda Zvakaongororwa pamapurimicha zvinoratidza kuti kugona kunhuwidza kunotanga pamasvondo makumi maviri nenhanhatu muchangosangana.
Kanapakaiswa chinhu chinonhuwirira mukati me "amniotic fluid" zvinowedzera kumedza kunoitwa ne "fetus". Pane zvinoita kuti, "fetus" ikanganisike kumedza nekunge paiswa zvinovava. Kazhinji kufinyamisa kumeso kunotevera.
Dzimwe nguva pane kunenge kukava makumbo kwakafanana nekufamba,kunoitika kunenge kusvetuka-svetuka.
Iyezvino "fetus" inenge isisina kuwunyana kumeso sezvo mafuta anenge avekuwanikwa mukati meganda. Mafuta anobatsira kuti muviri usatonhorwe Uye kupa simba kumwana kana aberekwa.
Pakupera kwemasvondo makumi maviri nemasere 'fetus'inokwanisa kunzwa mhere-mhere nezeve-zeve.
Pakupera kwemasvondo 30,kuratidza kufema kunenge kwavekuonekwa uye kwavekuonekwa nguva zhinji mu "fetus" zhinji.
Pamwedzi mina yekupedzisira yenhumbu, "fetus" inoratidza nguva yekutamba igoratidzawo nguva yekuzorora. Izvi zvinoratidza zvakahwanda zviri mukati-kati metsinga dzehuropi.
Pamasvondo makumi matatu Anemaviri zvinonzi "alveoli", kana zvekufemesa, zvinotanga kukura mumapapu. Izvi zvicharamba zvichikura kusvikira mwana avenemakore 8.
Pamasvondo 35 "fetus" inenge yavekugona kubata.
Pano "fetus" yanga ichiwana Zvakawanda-wanda zvichaita kuti mwana adewo izvozvo kana azvarwa. Pano tingati "fetus" inamai vaidya "anise", chidyo chinopa chiwitsi che"licorice" manakiro, achadawo kudya "anise" kana azvarwa. Vacheche vasina kumboraira "anise" mudumbu havadi kana kuidya.
'Fetus' ndiyo inotanga kuda kubuda nekubuditsa ma"hormone" akawanda anonzi "estrogen" uye ndipo panotanga kushanduka kwe "fetus" kuita mwana.
Kurwadziwa kwamai kunokonzerwa nekutatamuka kwechibereko, zvinokonzera kuti mwana aberekwe.
Kubva pakusangana Kusvika pakuzvarwa nekukura, makururo emunhu chinhu chisingapere, chinoenderera, uye chisina anoziva. Pane zvitsva zvirikuwanikwa nezvenyaya iyi inoshamisa chaizvo zvinoratidza kukosha kunoita kuchengeta "fetus" ichikura zvinova zvakanaka uye zvinopa hutano hwakanaka.
Kana tichiramba tichiwedzera kunzwisisa kwedu nyaya iyi, zvichatibatsirawo kuti vana vawane utano hwakanaka vasati vazvarwa nekunge vazvarwa.